Showing 61-72 of 110 results
English vocabulary online course in Myanmar You will probably learn English words faster when they are important to your daily life or come fromasubject that interests you. A good way to learn English vocabulary is to see and hear many repetitions of the words withinatopic or an interesting context likeastory orareading. Learning…
Teacher Ei Ei Aung
ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးကြီးဆုံး သိထားရမည့်အချက်များ
ကျန်မာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီ အရေးကြီးသိကောင်းစရာများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ Things you need to know about health.
Basic Network Switching Tutorials
Network Switching ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေသူတွေအတွက် Basic Networking Switching ကို လေ့လာလို့ရပါပြီ။ Networking ကို အခုမှစ လလေ့ာမယျသူအတှကျ အောကျပါ link တှငျ Basic Networking Concepts ကိုလလေ့ာနိုငျပါသညျ။ Basic Networking Concepts-Beginners Guide အောကျပါ link တှငျ Basic Networking နှငျ့ CCNA တိုကိုလလေ့ာနိုငျပါသညျ။ NETWOKING BASIC CCNA
Bridge to Kotlin ( Android Development )
Kotlin Android Development Tutorial ကို Myanmar လိုလေ့လာလိုက်ကြစို့။ အဓိကအားဖြင့် Programming Language တစ်ခုခုကို Object-Oriented Level အထိ သိထားသူများအတွက် Kotlin ကို Android Development အတွက် လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူ ပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ Kotlin အကြောင်းပိုမိုးသိရှိရန်-> About Kotlin
Digital Marketing Course in Myanmar What is Digital Marketing? Digital marketing encompasses all marketing efforts that use an electronic device or the internet. Businesses leverage digital channels such as search engines, social media, email, and other websites to connect with current and prospective customers. Digital Marketing Examples: Search Engine Optimization (SEO) Content Marketing Social Media…
July 25, 2019 /6Comments
LCCI စာရင်းကိုင် သင်ခန်းစာ
LCCI online training course ကို Myanmar လိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်။ အခုခေတ် စီပွားရေး လုပ်ငန်အောင်မြင်ဖို့ ဆိုလျှင် စာရင်းဇယားကို System ကျကျ ရေဆွဲဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီရေဆွဲထားတဲ စာရင်းကလည်းအသုံးတည့်ဖိုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိုလည်းစီပွားရေးလုပ်ငန်တွေမှာ စာရင်းဇယာ ရေဆွဲတတ်တဲဝန်ထမ်းအမြောက်အများလိုအပ်လာပါတယ်။ LCCI မှာ စာရင်းဇယာကို အခြေခံမှစပြီ Level 1, level 2… စသည်ဖြင့် level လိုက်သင်ယူရပါတယ်။ LCCI online training course ကို Myanmar လို Video training များဖြင့် အောက်တွင်လေ့လာလိုရပါတယ်။ Read More About LCCI Microsoft Excel ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် MyanmarBOC တွင်အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ LCCI Diplomas…
Free SketchUp training videos Myanmar Google SketchUp ဆိုတာက Hand Sketch ပုံစံဆှဲလို့ရတဲ့ Software ပါ။2D ကနေ 3D ပုံတှေ အထိကောငျးကောငျး ဖနျတီးလို့ရပါတယျ။ အရငျတုနျးကတော့ Civil / Archi တှအေတှကျရညျရှယျခဲ့ပမေဲ့ အခုအခြိနျမှာတော့ Civil ၊ Mechanical ၊ Game Development တှအေထိအသုံးပွုနိုငျလာခဲ့ပါပီ။ 3D ပုံတှကေို နားမလညျနိုငျတဲ့လူတှပေါသုံးနိုငျတဲ့အထိသူ့ရဲ့ Tools တှကေလညျး လှယျကူလှပါတယျ။ What Is Sketchup? SketchUp is an intuitive 3D modeling application that lets you create and edit 2D and…
Computer နှင့်ပက်သက်ပြီး သိထားသင့်သော နည်းပညာများ
Computerနှငျ့ပတျသတျပွီးသိထားသငျ့သောနညျးပညာမြား- Computer Technologyအကွောငျးကိုဖျောပွပေးထားပါတယျ Computerနှငျ့ပတျသတျသောနညျးပညာကိုလလေ့ာရာတှငျအဆငျမပွမှေုရှိပါက AdminTeamကိုဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။ Admin Teamကိုဆကျသှယျရနျ ညာဘကျ အောကျထောငျ့က အပွာရောငျChat Headလေးကိုနှိပျပွီး တိုကျရိုကျ (Live)ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ Related Courses- SmartPhone Photography Like Us F0llow Our Facebook Page- Myanmar Web Store
ဘ၀အတွက် လေ့လာစရာ နှင့် စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမည့် videos များကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။
Electronic Basic သင်ခန်းစာ
June 26, 2019 /7Comments
Electronic နှင့် ပတ်သက်သော သင်ခန်းစာများကို လေ့လာရအောင် electronic သင်ခန်းစာများက သင့်၏ electronic ဝါသနာကိုမြှင့်တင်ပေးစေနိုင်မှာပါ Electronicsသင်ခန်းစာများကို သင်ယူခြင်းဖြင့်သင်ဟာ Electronic ပညာရှင်အိပ်မက်ကို မက်နိုင်ပတယ်ဗျာ ဒါကြောင့် Electronicသင်ခန်းစာများကို Electronic ပညာရှင်အိပ်မက်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ Electronic သင်ခန်းစာကို လေ့လာလိုက်ရအောင်ဗျာ Myanmar Best Online Courses | MyanmarBOC Electronic Course/ Electronic Lessons Related Course- See More or Read More